ငါသည်ငါ့ဂီတမှတဆင့်လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးထဲ၌အမှတ်အသားတစ်ခုစွန့်ခွာချင်! - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
ပုံရိပ်တွေ: Albena Biserova
Albena Biserova အပြုသဘောဆောင်တဲ့စွမ်းအင်နှင့်အတူတရားစွဲဆိုတစ်ဦးပါရမီမိန်းမပျိုဖြစ်ပါတယ်။ 12 ၏အသက်အရွယ်မှာသူမစပိန်နိုင်ငံမှသူမ၏မိသားစုတစ်စုလုံးနှင့်အတူပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏လက်ရှိဇာတ်စင်ရောက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက်အသက်တာ၌များစွာသောအခက်အခဲများရှောက်သွား။ သူမအဆုံးအဖြတ်နဲ့ရည်မှန်းချက်ကြီး, သူ့ကိုယ်သူ rediscovers တစ်ခုချင်းစီကိုသစ်ကိုနေ့ဖြစ်၏။
ကျွန်မအဆိုတော်အဖြစ်ဂီတနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာနဲ့ကျွန်မတစ်ခါတစ်ရံအားလုံးတစ်ကြိမ်မှာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ, စည်းရုံး! ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီကကျွန်မတစ်ဦးမေတ္တာဂီတပွဲတော်စည်းရုံးနှင့်ငါ့အုပ်စုတစ်စု၏တစ်ဦးတင်ဆက်မှုတွေနဲ့ပရိသတ်ကိုအံ့သြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ကျွန်မပညာရှင်ပီသစွာတစ်နှစ်ဂီတအတွက်စေ့စပ်ပြီ။ ဂျက်ဇ်၏အနှစ်သာရမှပေါ်ပေါက်ဗီဒီယိုအမျိုးအစားအမျိုးမျိုး (ပေါ့ပ်, ရော့ခ်, ဝိညာဉ်, ဘလူး ... ) ရှိပါတယ်ကြောင့်တီးဝိုင်းရဲ့ style, jazz ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။
များစွာသောအခွက်၏အလိုဆန္ဒကိုသတ်စေ, ကံမကောင်း ... အခုတော့ပွဲတော်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏စုစည်းဖို့ဖက်ရှင်ရဲ့ - - စပိန်မြင်ကွင်းတစ်ခုအရှိဆုံးစီးပွားဖြစ်သီချင်းနားထောင်စည်းကြပ်ကြောင်းအကျပ်အတည်းများနှင့်အဆင့်ဆင့်ကတဆင့်ဝင်စွပ်စွဲပေါ့ပ်သို့မဟုတ်ကျောက်, ဒါပေမဲ့နေရာတိုင်းများစွာကို Indie အုပ်စုများနှင့်တွေ့ဆုံရန်။ အဲဒီမှာကတခြားစတိုင်များများအတွက်မြင်ကွင်းတစ်ခုသင်တန်း၏, သည်, ဒါပေမဲ့သူတို့အတော်လေးနှိပ်ကွပ်နေကြသည်။ သင်ရုံသင့်ရဲ့အိမ်တံခါးခေါက်နှငျ့သငျတောင်းပန်မှတစ်စုံတစ်ဦးကိုစောင့်ဆိုင်းနေလျှင်၎င်းသည်လွယ်ကူသောမဟုတ်ပါဘူး။ သင်သည်ထိုသူတို့ပေါင်းစပ်လျှင် Superstar စားသောက်ဆိုင် ... ပိုက်ဆံသို့မဟုတ်အလိုတော်နှင့်ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာတစ်ချိုးစေရန်နည်းလမ်းနှစ်ခုများမှာ! ယခုငါအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်မှုရဖို့ငါသဟဇာတအထဲတွင်ရှိနေပါသည်ဒါငါ့အအသံများနှင့်သာယာလှပအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေရန်, ဒါပေမယ့်လည်းအုပ်စုတစု၏ရူပါရုံကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစားကြသည်။
Djazzling သတ်တဝါ ကျွန်တော်တို့အုပ်စု Hiro Saulong ထက်ပိုဆယ်ငါးနှစ် '' အတှေ့အကွုံနဲ့စပိန်ဂစ်တာသမားတွေနဲ့အတူတူဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကနှစ်လုံးအဖြစ်စတင်ကျနော်တို့ပုံရိပ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဤပုံစံကိုကပ်ဖို့စီစဉ်ထားပေမယ့်ကျနော်တို့ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်နှစ်ခုဂီတပုံစံများရှိပါတယ်: electroacoustic နှစ်လုံးနှင့်အပြည့်အဝလျှပ်စစ်ဦးတည်း - တဲ့ bass သမား, ဒရမ်သမားနဲ့အခြားဂစ်တာသမားနှင့်အတူအုပ်စုတစ်ခု။ ငါဂီတကျနော်တို့အင်္ဂလိပ်နှင့်စပိန်ရေးရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကျင့်ကိုကျင့်ငါတို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောသီခငျြးမြားကိုဆက်သွယ်မအထူးသဖြင့်ဆောင်ပုဒ်ရှိသည်, စကားပြော, ငါတို့ကွဲပြားခြားနားနေထင်ပါတယ်။ အလွန်အထိခိုက်မခံကြောင်းတစ်ခုပရိသတ်အတွက်အကြောင်းအရာရှိ၏ ထို့အပြင်တကယ်ပဲအားကြီးသောလူများအတွက်, ပင်ရှုပ်ထွေးသို့မဟုတ်မေတ္တာကခုန်ဖြစ်ကြပြီးပြဿနာများအကြောင်းကိုမေ့လျော့သောသူတို့အဘို့။
electroacoustic နှစ်လုံးကို, Ivelina Dimitrova, ဂျက်ဇ် Fusion ကို, ဂီတ, စပိန် | 22-02-2017 | rating:5/ 30